अब्दुल गानी बारादार बन्लान् अफगानिस्तानका अन्तरिम राष्ट्रपति ? « Supremekhabar
अब्दुल गानी बारादार बन्लान् अफगानिस्तानका अन्तरिम राष्ट्रपति ?
प्रकाशित मिति : २०७८, श्रावण, ३१, आईतवार १७:१९
अफगानिस्तानको तालिबानका सहसंस्थापक मुल्ला अब्दुल गानी बारादर आइतवार बहालवाला राष्ट्रपति अशरफ गानीसँग वार्ताका लागि काबुल पुगेका छन् ।
बारादर र गानीबीच राष्ट्रपति भवनमा वार्ता चलिरहेको छ ।
गानीले राजीनामा दिएर बारादरलाई अन्तरिम राष्ट्रपति बनाइने केही सञ्चारमाध्यमले खबर दिएका छन् ।
कतारले तालिबान र अफगान सरकारबीचको सम्झौताका लागि पहल गरेको हो । अमेरिकाले यसका लागि अनुमति दिएको हो ।